Darpan Nepal – कागको अचम्मको बानी ! मृत शरीरप्रति झन् बढि यौन आकर्षण
कागको अचम्मको बानी ! मृत शरीरप्रति झन् बढि यौन आकर्षण
Jul 22, 2018adminIntresting fact0Like
एजेन्सी । काग एउटा यस्तो चरा हो जसको गुण अरु चराहरुसंग प्राय मिल्दैन।कागको जस्तो अद्भूत क्षमता पनि अन्य चराहरुमा छैन्। काग मासु खान्छ भन्दैमा समाजमा कागलाई मांसाहारी चरा पनि भन्ने गरिन्छ तर काग बढीजसो रुपमा साकाहारी नै हुने गर्छ।
कागले घाँसका पातदेखि किराफट्याग्रा अन्न सहित खाने गर्छ। कागको एउटा अनौंठो कुरा पनि पत्ता लागेको छ। जसले मृत्युपछि पनि सम्बन्ध राख्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।जीवित कागहरु आफ्ना विश्वासी साथीहरुसँग ठूलो आवाजमा फखेटा फटफटाउँदै खुशी साट्छन। त्यसरी नै कागको जोडीको प्रेम बढ्ने गर्छ।
अधिकाशं कागहरुले मृत पोथी कागसँग यौन सम्बन्ध राख्न जीवितसँग भन्दा बढी मन पराउने गर्दछन्। चरा वैज्ञानिकहरुले चराका यस्ता कयौं रोचक तथ्य पत्ता लगाएका छन्।त्यसै रोचकहरु मध्ये पोथी काग मरेको केही दिनसम्म भाले कागले धेरै पटक सम्भोग गर्ने गर्छन्। जब मरेको कागको शरीरमा किराहरु लाग्न सुरु गर्छन् त्यसपछि मात्र भाले कागले सम्भोग गर्न छोड्ने गर्छ।
चरा वैज्ञानिकहरुले हाँसदेखि डल्फिन समेतले आफ्नै प्रजातिका मृत सदस्यसँग यौन सम्बन्ध राख्ने गरेको पत्ता लगाएका छन्।एक जोडी अनुसन्धानकर्ताहरुले हालै अमेरिकी कागहरुमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार आफ्नै प्रजातिकाबीचमा आधारित रहनुमा ब्याकवोनले भूमिका खेल्ने तथ्य पत्ता लगाएका छन्।
Previous Postनेपाल तरुण दलका कार्यकर्ता माथि प्रहरीले ताक्यो पेस्तोल, यसरी भयो खतरनाक झडप Next Postपोल्यो ? अपनाउनुस् यी घरेलु तरिका, जलनका साथै दाग पनि हट्छ